MacBook Pro oo leh processor M1X oo loogu talagalay WWDC | Waxaan ka socdaa mac
MacBook Pros oo leh processor M1X ee WWDC
Noocyada kala duwan ee xanta ayaa sii socota oo soo baxaya oo ka hadlaya imaatinka a cusub MacBook Pro oo leh processor ka awood badan kan hadda jira ee M1 ee WWDC ama xitaa kahor. Way cadahay in wararka la isla dhexmarayo aysan ahayn inay markasta run ahaadaan laakiin kiiskan waxaan ka hadlaynay imaatinka kooxo cusub dhowr bilood kuwaanna waa la bilaabi karaa si ka dhakhso badan sida aan filayno.
Dabcan waxyaabaha Apple aad ayey u socdaan si dhakhso leh waana in muddo gaaban aan haysanno processor-ka M1 laakiin hubaal in kuwan horay loo sii hagaajiyay ku fuliso awood dheeri ah iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo leh waxtarka tamarta kombiyuutarada soo socda ee Mac.
14- iyo 16-inji MacBook Pro leh M1X
Kadib imaatinka M1 ee iPad Pro cusub, shirkadu waxay mar horeba ka fikiri doontaa hirgalinta M1X processor-ka Mac-yada soo socda. Dabcan waxaan aaminsanahay in howl-wadeenadan "in badan ku jireen foornada" iyo 14-inch iyo 16-inch MacBook Pros ayaa noqon doona kan ugu horreeya ee fuliya.
Tartanka waxqabadka wanaagsan, waxtarka wanaagsan iyo kharash aad u jaban oo loogu talagalay hawl-wadeenadan ayaa socday in muddo ah waana caddaalad Daahfurka MacBook Air, 13-inch MacBook Pros iyo Mac mini sanadkii hore markay runti safarkiisa bilaabatay.
Laga soo bilaabo daqiiqadaas ilaa maanta wararka xanta ah ee ku saabsan suurtagalnimada in Apple ay soo saarto M2 ama M1 horumar leh ayaa fure u ahaa, dhawaanahan warkii ku saabsanaa processor-ka Apple Silicon M1X wuxuu la yimid xoog waana macquul in xitaa ka hor WWDC sanadkan aan kooxahan haysan soo bandhigay. Xitaa waxaa jira hadal ah suurtagalnimada bilaabista iMac Pro, koox aad uga awood badnaan lahayd kuwa hadda jira laakiin isku qaab ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » MacBook Pros oo leh processor M1X ee WWDC
Molly Hager sidoo kale waxay ku biiraysaa kooxda jilista shanta maalmood ee xuska
Mid kamid ah howl wadeenada Apple ayaa sheegay in Siri Remote ay adagtahay in lawaayo